जनताको अभिमत अनुसार ५ नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन : डा. महत - Sudur Khabar
बच्चा बोकेरै दिनभरि ई-रिक्सा : ‘बिचरा’ होइन काम गर्ने महिला हुँ राजदूतको स्वागतमा वालवालिकालाई दिनभरी लाईनमा राखेको भन्दै आपत्ति खप्तडमा बाक्लो हिमपात, संरक्षित वन्यजन्तु संकटमा चिसोले श्वासप्रश्वासका विरामी बढे मानिसहरुमा नसर्ने रोगको समस्या भयावह बन्दै जनताको अभिमत अनुसार ५ नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन : डा. महत
प्रकाशित मिति: January 10, 2017
सुदुर खबर, कैलाली, पुस २६ । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले पाँच नम्बर प्रदेशका जनताको अभिमत अनुसार प्रदेशको सीमाङ्कन गर्नु पर्ने बताउनुभएको छ ।
धनगढीमा आज आयोजित काङ्ग्रेस कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएको नेता महतले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले काँग्रेसले लिएको आर्थिक उदार नीतिमा अहिले सबै दलहरु आउनु परेको बताउनभयो ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतले काङ्ग्रेसले अगुवाई गरेको बहुलवाद सिद्धान्तको पद्धति र आर्थिक नीतिमा सवै दलहरु आउनु परेकोले नेता कार्यकर्ताले शिर ठाडो गरेर पार्टीको संगठनमा लाग्नु पर्ने बताउनुभयो ।
२०४८ देखि काङ्ग्रेसले अघि सारेको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमकै कारण लामो द्वन्द्व र पटक पटकको राजनीतिक अस्थिरताका बावजूत देशको अर्थ व्यवस्था टिकेर बसेको दावी उहाले गर्नुभयो ।
काङ्ग्रेसका नेता एवं बन तथा भू–संरक्षण र राज्य मन्त्री दीर्घराज भाटले स्थानीय चुनावलाई ध्यान दिएर संगठनमा लाग्नु पर्ने बताउनुभयो । काङ्ग्रेसका अर्का नेता एवं सांसद रामकृष्ण यादवले एमाले र मधेशी मोर्चाको अतिवादमा अहिले देश फसेको दावी गर्दै यसलाई निकास दिन कांग्रेस सक्षम रहेको बताउनु भयो ।
बच्चा बोकेरै दिनभरि ई-रिक्सा : ‘बिचरा’ होइन काम गर्ने महिला हुँ
राजदूतको स्वागतमा वालवालिकालाई दिनभरी लाईनमा राखेको भन्दै आपत्ति
खप्तडमा बाक्लो हिमपात, संरक्षित वन्यजन्तु संकटमा
चिसोले श्वासप्रश्वासका विरामी बढे
लुटेराले लुटे ७८ हजारसहित सिसी क्यामेरा
सुनसरी, माघ ५ । हतियारधारी समूहले सुनसरीमा ७८ हजार रुपैयाँसहित पाँच वटा......
धनुषामा ट्रयाक्टर पल्टिँदा तीन जनाको मृत्यु
जनकपुर, माघ ५ । धनुषामा ट्रयाक्टर दुर्घटना हुँदा तीन जनाको ज्यान गएको छ ।......
त्रिशूलीमा ट्याङ्कर खस्यो
चितवन, माघ । काठमाडौंबाट बारातर्फ जान आउँदै गरेको खाली पेट्रोल ट्याङ्कर......
यमबुद्धले आत्महत्या नै गरेको पुष्टी, शव नेपाल ल्याउने तयारी
काठमाडौं, माघ ५ । लन्डनस्थित आफ्नै निवासमा झुन्डिएका भेटिएका चर्चित......
करेन्ट लागेर एक युवतीको मृत्यु
बाग्लुङ, माघ ४ । बाग्लुङको रायडाडाँमा करेन्ट लागेर एक युवतीको ज्यान गएको छ......
सुन्दर सुदूर पश्चिमको पहिलो अनलाईन मिडिया- सुदूर खबर अनलाईन मिडिया प्रा.लि. , जस्मा सुदूर पश्चिमको चिनारी , खबर, प्रर्यटकिय क्षेत्रको जानकारी , सुदूर एव मध्यपश्चिमको लोकदेउडा लाई उठान गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता ! जस्को हेड अफिस सुन्दर नगरी अत्तरिया कैलालीमा अबस्थित छ ।
Address: Attariya Kailali Nepal
Phone no: 9800620133
© २०७3 सर्वाधिकार सुरक्षित सुदुर पश्चिम खबर, Design By: www.ekumar.com.np